Kuphenduleke imithandazo ethola indodana uCici
AKUVUMI nokuthi alale ebusuku egade indodana yakhe enezinsuku izelwe umculi uBusisiwe "Cici" Twala Isithombe: Instagram
BONGIWE ZUMA | May 23, 2020
AKAKAKHOLWA namanje umculi wakuleli ukuthi usengumama wendodana. UCici Twala owake wabona umhlaba uncipha, walahlekelwa yithemba nakwezothando kulandela ukuhlukunyezwa womunye wabaculi ohlonishwayo baze bayisana enkantolo.
Uthe namanje usamangala uma ebona indodana yakhe. UCici wamangaza abaningi efaka isithombe sesisu sakhe ebonakala ezithwele futhi sekukhombisa ukuthi usezobeletha.
Ezinsukwini ezintathu ezedlule uqalile ukufaka izithombe zendodana yakhe ekhasini lakhe lika -Instagram. Abantu abaningi bakhombise ukumjabulela kakhulu okubalwa nosaziwayo.
Ebhala ezinkundleni zokuxhumana, uCici uthe indodana yakhe iyisibusiso empilweni yakhe futhi ubevele eseyilindele ngabomvu.
"Imithandazo yami iphenduliwe. Bese ngihlulwa nawukulinda ukubona indodana yami," kusho uCici. Njengabo bonke abantu besifazane abaqala ukuthola izingane, naye uthi wesaba ngisho ukulala egade ingane ubusuku bonke.
"Ngihlala ngihleli ngilokhu ngikubuka ngoba angikholwa ukuthi uNkulunkulu uphendule imithandazo yami," kubhala uCici. Ngaphandle kukaCici bakhona nabanye osaziwayo abakhulelwe okulindeleke ukuthi babelethe noma kunini.
UZenande Mfenyana omunye wabantu obekulokhu kuqagulwa isikhathi eside ukuthi ukhulelwe kodwa engafuni ukuphumela obala. Kodwa emasontweni adlule waqala wadedela izithombe zakhe ezikhombisa ukuthi ukhulelwe.
UZenande ungomunye wosaziwayo abahalalisele uCici ngokuthola indodana.
Inkukhu inqunywe umlomo kuBlack Coffee ephenywa ibheshu ngumlandeli
Usulwe izinyembezi umlingisi owaphoxeka kuqedwa umdlalo weTV
#Coronavirus: Uhulumeni umunyunga eyokubuyela esigabeni sesihlanu
Iphoyisa lingqokloze ngenhlamvu umkalo nomukhwe bashona